resakaboot [wiki ifg]
Writing /home/infogasy/domains/wiki.infogasy.net/public_html/data/cache/2/2acbd6b9e28292c9f242ea6d03e16c29.xhtml failed
Rehefa vao alefa ny solosaina, ny programa mandeha voalohany dia ny programa misy ao anatin’ny BIOS. Io programa io no manoro ny solosaina hoe iza no peripherique handefasana azy. Mety ho kapila henjana io, na kapila manjelatra, na avy amin’ny reseau, na avy amin’ny usb sns ... Azo safidiana izany ao amin’ny fitaovana fanaovana config-n’ny bios.
Ao anaty kapila henjana indray, dia misy ny atao hoe MBR (master boot record). Izy io dia any amin’ny secteurs voalohany amin’ilay kapila no mipetraka. Ny MBR no mirakitra ny momba an’ireo partitions primaires 4, ary mirakitra koa ny momba ny toerana hi-demarrer-ny ao anatin’ilay kapila.
Ny bootloader dia programa mipetraka any anatin’ireo kapila / partitions misy OS halefa. Io bootloader io izany no mandefa ny kernel-n’ny OS. Avy eo manaraka ny lalana fiaingany ny OS tsirairay.
Ho an’i Windows dia NTLDR no bootloader-ny, ary ao amin’ny c:\_boot.ini no fanaovana ny config
Ho an’i Linux indray dia misy ny Lilo (config: lilo.conf) na ny Grub (config: ....grub/menu.lst)
Ny ntldr dia tsy afaka mi-boot afa-tsy windows ihany. Ny Lilo sy grub kosa dia afaka mandefa izay mety misy ao anatin’ny solosainao. Amboarina fotsiny ny config-ny ao anatin’ireo rakitra voatondro etsy ambony ireo. Mety miova araka ny distribution ny toerana exact misy azy.
Araka izany, dia azo antsoina hoe “boot manager” koa izy roa farany ireo. Mbola betsaka koa ny boot manager hafa, izay mety ho tsara kokoa, arakaraka ny ilanao azy. Ireto misy ohatra vitsivitsy:
GAG : http://gag.sourceforge.net/index.html
XOSL : http://www.ranish.com/part/xosl.htm
Fanaovana multiboot Windows sy Linux
sns ... (azo ampiana)
resakaboot.txt · Novaina farany:: 2008/09/11 12:43